भर्खरै औषधि भण्डारगृहमा गोली चल्यो : ४ जनाको मृत्यु ! «
भर्खरै औषधि भण्डारगृहमा गोली चल्यो : ४ जनाको मृत्यु !
प्रकाशित मिति : ६ आश्विन २०७५, शनिबार ०४:०३
रिल्याण्ड । अमेरिकाको मेरिल्यान्डस्थित एक औषधि भण्डारगृहमा कार्यरत एक महिलाले आफ्नै सहकर्मीहरुमाथि अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा तीन जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । ती गोली चलाउने महिलाले आत्महत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । औषधिको गोदामघरमा सहकर्मीबीच विवाद बढ्दै गएपछि बिहीबार बिहान गोली चलेको थियो । उक्त घटनामा अरु तीनजना गम्भीर रुपमा घाइते भएको बताइएको छ ।
स्थानीय प्रहरी अधिकारी जेफ्री गाहलरले बाल्टीमोर निवासी स्नोचिया मोसेलीले चलाएको अन्धाधुन्ध गोलीबाट तीन जनाको मृत्यु भएको र केही घाइते भएको जनाइएको छ । प्रहरीले उक्त गोलीकाण्डको मुख्य कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । ती महिला स्वयँले आत्महत्या गरेकाले जवाफमा गोली नचलाएको प्रहरीले स्पष्ट गरेको छ ।
यो दुई दिनभित्रै अमेरिकामा भएको यो तेस्रो ठूलो गोलीकाण्ड हो । बुधबार पनि विस्कन्सिन राज्यमा अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा तीन जना गम्भीर घाइते भएका थिए भने पेन्सिलभेनियामा भएको एक अर्को घटनामा एक व्यक्तिले चलाएको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु हुनुका साथै चारजना घाइते भएका थिए ।
बढी सुन्दर भएकै कारण बेरोजगार भइन् यी मोडेल
मानिस बेरोजगार हुनुका कारण के के हुन सक्दछन् ? देशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर नहुनु, मानिस
गर्लफ्रेण्डको परीक्षा दिन केटीको पहिरनमा पुगेपछि…
काठमाडौं। प्रेममा र युद्धमा सबै कुरा जायज हुन्छन् भनिन्छ । यो उखानलाई चरितार्थ गरेका छन्
औपचारिकतामा मै सीमित कीर्तिपुरको गाइजात्रा
कीर्तिपुर नगरपालिकाले कोरोना भाइरसका कारण नेवार समुदायको महत्वपूर्ण पर्व सापारु (गाईजात्रा) औपचारिकतामा सीमित गरेको छ
किन हरेक घरमा ‘लक्की बेम्बो’ राख्न जरुरी ?
बेम्बो प्लान्टलाई ‘गुड लक’ बिरुवाका रूपमा चिनिन्छ । पछिल्लो समय यो बिरुवा धेरैको घरमा देख्न